Vaovao - Fikojakojana sy fandidiana sivana kitapo
Fikojakojana sy fandidiana sivana kitapo
Ny tsingerin'ny fanadiovana sy ny fotoana fanadiovana ny taolam-panala vovoka dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fandrika sy ny fomba fiasa.
Kitapo fanadiovana, ny fotoana fanadiovana ary ny fomba fanadiovana nalaina ary ny toetoetran'ilay zavatra hiatrehana sy ny anton-javatra hafa, dia tsy maintsy fananana vovoka, fifantohana vovoka sns, ary aorian'ny fizahana ilaina hamaritana.
Ny tsingerin'ny fanadiovana sy ny fotoana fanadiovana hamaritana ny fotokevitra, araky ny fomba fanadiovana isan-karazany amin'ny alàlan'ny fanadiovana samihafa, ny zavatra voalohany tokony hodinihina dia ny mijanona ao anaty kitapo sivana amin'ny sosona adhesion manaraka, mba hahazoana antoka fa ny fotoana fanadiovana mahomby farafahakeliny, farito ny tsingerin'ny fanadiovana. Ataovy hatramin'ny farany azo atao ny tsingerina fanadiovana, fohy ny fotoana fanadiovana mba hahafahany mihazakazaka eo ambanin'ny toetry ny fanoherana ny fanesorana vovoka ara-toekarena.
Toy ny lavenona manadio lamosina atmosfera:
Raha fohy loatra ny fotoana fanadiovana dia tsy mbola voafafa tanteraka ny vovoka amin'ny kitapo sivana mba hiasa, hamerina haingana ny fanoherana ary hitombo tsikelikely. Etsy ankilany, raha lava loatra ny fotoana fanadiovana dia hitombo ny hafainganam-pandrefesana noho ny fanadiovana be loatra, ary ny vovoka dia afaka miditra amin'ny lamba sivana hiteraka ny kitapo sivana hanentsenana sy ho vaky.
Fomba fanadiovana hovitrovitra:
Ary ny rivotra dia manadio karazana fanadiovana iray ihany, raha ny ampahany amin'ny tsy fahombiazan'ny fiara kosa no iray amin'ireo antony.
Raha fohy loatra ny fotoana fanadiovana, noho ny fanadiovana be loatra, matetika, miteraka vovoka dia mety hiditra ao afovoan'ny lamba sivana vokatry ny fametahana sy ny fahatapahana antony. Mifanohitra amin'izany kosa, ny fotoana fanadiovana dia lava loatra, avy eo ny fanangonana vovoka harona dia hanamboatra ilay fitaovana amin'ny fiasan-doha mahery vaika.
Ny sivana kitapo mandritra ny fiasa dia tokony hitandrina hatrany ny rafitra fampitahana tsindry, mba hamaritana raha misy ny olana. Tokony hosoratana mialoha raha toa ka mitombo ny sandan'ny tsindry amin'ny fandidiana mahazatra, toy ny fahitana fa mitombo ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry, dia mety hidika izany fa manentsina ny kitapo sivana, fatotra amin'ny vovoka, tsy fahombiazan'ny andrim-panadiovana, mandroba be loatra ny siny lavenona sns. Ny fihenan'ny tsindry, izay mety hidika fa toa simba ny kitapo, miala, ny sisin'ny fidirana amin'ny fantsom-pantsakana na mikatona ny valizy, misy ny famoahana eo anelanelan'ny kabinetra na ny efitrano ambanin'ny efitrano.
Satria ny sivana rehetra dia samy manana ny mampiavaka azy sy ny masontsivana, rehefa nisafidy fitaovana sivana ho an'ny kitapo mpanivana vovoka isika, dia tsy maintsy fantarintsika ireto masontsivana manaraka ireto: ny mari-pana, ny mando, ny savaivony, ny vatan'ny simika entona, ny vovoka masiaka, ny masontsivana sivana mekanika.
filtration, vovoka mahasoa, sivana entona avo lenta.
Ny orinasa RIQI sivana kitapo dia manome vahaolana tsara mifanaraka amin'ny toetran'ny vovoka, manampy anao hisafidy fitaovana sivana tsara hahomby amin'ny sivana tsara indrindra.